कर्णालीवासीमा देखिएका सकारात्मक परिवर्तनहरू – Rara Khabar
कर्णालीवासीमा देखिएका सकारात्मक परिवर्तनहरू
सरसफाइको कमजोर अवस्था भनेर आलोचित भइरहने कर्णालीमा यतिखेर कोरोनाभाइरसको महामारीले त्यहाँका मानिसहरूलाई सजग बनाएको छ।
समाचारमा कोरोनाभाइरसबारे अनेकथरी विवरण सुनिन थालेपछि मान्म, कालिकोटकी देवकला आचार्य अहिले हात धुने काममा एकाएक बढी ध्यान दिन थालेको सुनाउँछिन्।
“पहिले शौचालय गएपछि मात्रै साबुनले हात धोइन्थ्यो,” उनी भन्छिन्, “अहिले भाइरसको डरले दिनमा ६/७ पटक साबुन पानीले मिचेर हात धुन्छु।”
हात धुने बानी
जाजरकोटकी रिना विकको अनुभवमा फेरिएको यही बानीका कारण डेढ महिनायता घरपरिवार मात्र नभएर टोलछिमेकमै कोही पनि बिरामी नपरेको उनीहरूको अनुभव छ।
सरसफाइप्रति सजग हुन थालेको देवकला र रिनाको जस्तो अनुभव अहिले कर्णाली प्रदेशमा देखिएको परिवर्तनको उदाहरण हो।
यस भेगमा सरसफाइको कमीकै कारण वर्षेनी झाडापखाला, मौसमी रुघाखोकीजस्ता रोगका विभिन्न खाले प्रकोप नै देखा पर्ने गरेको छ।
प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक रीता भण्डारी जोशीका अनुसार झाडापखाला, मौसमी रुघाखोकीका प्रकोपहरू यसपटक अहिलेसम्म कतै देखिएका छैनन्।
उनी भन्छिन्, “यसपटक कतै त्यस्तो समस्या नदोहोरिनु भनेको कोरोनाभाइरसको कारण हात धुने र व्यक्तिगत सरसफाइ गर्ने बानीमा आएको परिवर्तनले हो भन्ने प्रस्ट हुन्छ।”
नेपाल जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०१६ का अनुसार नेपालमा ४७ प्रतिशत र कर्णाली प्रदेशमा २६ प्रतिशत मानिसले मात्र साबुन पानीले हात धुने गर्छन्।
पछिल्लो समय कोरोनाभाइरसको महामारीले गर्दा यो दर उल्लेख्य रुपमा वृद्धि भएको खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्त महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष कुलमणी देवकोटाको दाबी छ।
उनी भन्छन्, “अभियानकै रुपमा हात धुन सिकाए पनि त्यो सोचेजस्तो प्रभावकारी हुन सकेको थिएन। तर अहिले व्यक्तिगत सरसफाइ गर्ने बानीमा ठूलो परिवर्तन आएको देखिन्छ।”
अहिले मानिसहरू सरसफाइप्रति बढी संवेदनशील देखिनु कोरोनाभाइरसले पारेको सबैभन्दा सकारात्मक पक्ष भएको उनी बताउँछन् ।
खाना पकाउनु, खानु र खुवाउनु अघिपछि, शौचालय गएपछि, बच्चाको दिसा धोएपछि, फोहोर वस्तु छोएपछि, जनावार छोएपछि, बाहिरबाट घर फर्केपछि साबुन पानीले मिचीमिची हात धुनुपर्ने अनिवार्य रहेको भनेर यस भेगमा थुप्रै अभियान चलाइएका छन्।
तर विभिन्न विवरणका अनुसार शौचालयपछि र खाना खानु अघिपछिबाहेक अरू समयमा भने एकदमै थोरै व्यक्तिले मात्र साबुनले हात धुने गरेको पाइन्छ।
कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण रोक्न गरिएको लकडाउनले दमका बिरामीलाई ठूलो राहात भएको बताइन्छ।
लकडाउन सुरु हुनुअघि साँझबिहान दमको औषधी खानेहरु अहिले दिनमा एकैपटक मात्र खाए पुग्ने अनुभव सुनाउँछन्।
चार वर्षदेखि नियमित दमको औषधि लिइरहेकी वीरेन्द्रनगरकी नन्दा देवकोटाको अनुभव छ, “लकडाउनअघि बिहानबेलुकै औषधि नखाने बित्तिकै दम बढ्थ्यो अहिले गाडी चल्दैनन्। धुवाँधुलो पनि छैन। त्यसैले एकपल्ट मात्रै औषधि लिए पुग्छ।”
कालिकोटका चित्रसिंह गाउँलेका अनुसार जथाभाबी हात नमिलाउने, मास्क र स्यानिटाइजर प्रयोग गर्ने जस्ता यसअघि सहजै नदेखिने बानी अहिले मानिसहरूमा देखिन थालेको छ।
उनले सुनाए, “यस प्रकोपले गाउँघरमा अहिले सरसफाइमा एक किसिमको जागरण नै जगाएको छ। वर्षौँमा आउन नसकेको परिवर्तन अहिले एकाएक देखिएको छ।”
कोरोनाभाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि हरेक व्यक्तिको मोबाइल, सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा आइरहेका सरसफाइसम्बन्धी सन्देशले धेरैलाई सजग बनाएको बताइन्छ।
हुम्लाको ताजाकोट गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष मञ्जु बुढा भन्छिन्, “ताजाकोटमा वर्षेनी मौसमी रुघाखोकीको प्रकोपले सताउँथ्यो। तर सरसफाइकै कारण पछिल्लो डेढ महिनामा गाउँमा कुनै समस्या देखिएको छैन।”
कोरोनाभाइरसबाट जोगिन यतिखेर स्थानीय तहदेखि विभिन्न संघसंस्थाले गाउँगाउँमा हात धुने साबुन, सेनिटाइजर र मास्कजस्ता सरसफाइका सामाग्री वितरण गरिहेका छन्।
प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा कार्यरत डा. केएन पौडेलको अनुभव छ, “डरको कारण व्यक्तिगत सरसफाइ, खानपिनमा ध्यान दिएकोले हुनसक्छ अस्पताल आउने बिरामीको सङ्ख्या पनि ह्वातै घटेको छ।”
कर्णालीका सरकारी कार्यालय, अस्पताल लगायतले सेवा लिन कार्यालय आउनेका लागि कार्यालय परिसरमै समेत साबुन पानीले हात धुने व्यवस्था मिलाएका छन्।
अर्का चिकित्सक डा. नवराज केसीले नकारात्मक अवस्थाबीच यसले दिएको सकारात्मक अवसरका रूपमा यसलाई अर्थ्याएका छन्।
उनी भन्छन्, “कोरोनाभाइरसले अर्थतन्त्रलाई नयाँ ढङ्गले सोच्न, पर्यावरण जोगाउन, व्यक्तिगत सरसफाइमा ध्यान दिन, धेरै रोगहरू जङ्गली जनावरबाटै सर्ने भएकोले त्यस्ता जनावरको सिकार नगर्न र पूर्वसावधानी अपनाउन मानिसलाई उत्प्रेरित गरेको छ।”
कर्णाली प्रदेशमा अहिलेसम्म कोही पनि कोरोनाभाइरसबाट सङ्क्रमित भएको पुष्टि भएको छैन। (बीबीसीबाट )
प्रकाशित मितिः ३ जेष्ठ २०७७, शनिबार ०६:५१